တောရက်စ် | | ကိုယ်အလေးချိန်ကျ
လေ့ကျင့်ခန်းမပါဘဲကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်မလွယ်ကူသော်လည်း ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်သယ်ဆောင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် မျှတသောအစားအစာဖြစ်သည် နှင့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်စားသောအရာထက်နိမ့်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုနှင့်အတူ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်မသွားပါကသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလောင်ကျွမ်းစေမည့်ကယ်လိုရီကိုကုန်လွန်စေရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရမည်ဟုဆိုလိုသည်။
ထို့ကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်း၏အကူအညီမပါဘဲသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်၎င်းတို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ရန်အတွက်ကယ်လိုရီနည်းနည်းသုံးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အခု၊ သင်ကောင်းစွာစားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် မဟုတ်ရင်သင်ကသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ် နှင့်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်ပျက်သင့်ပါတယ်တစ်ခုခုပါပဲ။ အကယ်၍ သင်အလေးချိန်များစွာဆုံးရှုံးရန်လိုအပ်ပါကအာဟာရပညာရှင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင့်မှာအားကစားလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူး၊ သင့်မှာလုံလောက်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်လုံးဝမကြိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာသင်မတွေ့ရှိရသေးခြင်းဖြစ်သည် လျောက်ပတ်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု မင်းအတွက်။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်မသန်မစွမ်းဖြစ်စရာမလိုပါ ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ယခုတွင်၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏အကူအညီကိုရယူခြင်းကဲ့သို့ရိုးရှင်းမည်မဟုတ်ပါ။
ပိုနည်းသောကယ်လိုရီကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရကိုယ်အလေးချိန်ကျတဲ့အစားအစာက ၈၀% အစားအစာနဲ့ ၂၀% လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါဝင်တယ်။ အခုလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ရင် သင်စားသောကယ်လိုရီကိုလျှော့ချပါ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်စွမ်းအင်များစွာမလိုအပ်သောကြောင့်သင်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေမည့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာစားပါဒါကမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကူညီပေးတယ် ပိုမိုထိရောက်စွာကယ်လိုရီကိုမီးရှို့ပါ။ ထို့ကြောင့်တစ်နေ့ချင်းတွင်တစ်ချိန်တည်းစားရန်ကြိုးစားပါ။
ဖိုင်ဘာတွေအများကြီးယူပါဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အစေ့အဆန်စသည့်ကယ်လိုရီနိမ့်သောအစားအစာအများစုတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည် အူလမ်းကြောင်းအကူးအပြောင်းကိုထိန်းညှိ အစားအစာကိုပြောင်းလဲသောအခါများသောအားဖြင့်လျော့နည်းသွားသည်။
သင်ဗိုက်ဆာတယ်၊ ရေဆာတယ်ဆိုတာသိအောင်လေ့လာပါဖြေ - ဆာလောင်မှုကိုရေငတ်တာနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ရောထွေးခဲ့တယ်။ သင်ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခံစားရသည့်အခါသေချာစေရန် ပုံမှန်အစာစားချိန်ရေတစ်ခွက်လောက်ခဏစောင့်ပါ။
စားသုံးခြင်းလျှော့ချပါဖြေ။ ။ ကယ်လိုရီနည်းနည်းကိုစားရတော့မယ်၊ မခံရရန်အဖြစ် ဝက်အစားအစာတစ်ပန်းကန်၏အမြင်အာရုံအကျိုးသက်ရောက်မှုသေးငယ်ပြားကိုသုံးပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင့် ဦး နှောက်သည်ပန်းကန်လုံးပြည့်နေကြောင်းနှင့်သင့်အားပိုမိုမြန်ဆန်စွာခံစားရရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟူသောအချက်ကိုလက်ခံရရှိသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းမပါဘဲကိုယ်အလေးချိန်ကျနိုင်သော်လည်းမည်သည့်ကာယလှုပ်ရှားမှုကမဆို၎င်းကိုသင်အောင်မြင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာကိုယ်အလေးချိန်ပိုမြန်အောင်လုပ်နိုင်ရုံသာမကဘဲပိုကောင်းလာလိမ့်မယ်။ မင်းကပိုကောင်းတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရှိပြီးအချိန်တိုအတွင်းမှာပိုပြီးကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးကြည့်ရလိမ့်မယ်။ သင်မကြိုက်သည့်အားကစားများကိုမစဉ်းစားပါနှင့်၊ အကြောင်းမှာသင်လမ်းလျှောက်ထွက်ရန်၊ အိမ်၌ကခုန်ရန်သို့မဟုတ်ယောဂအနည်းငယ်ပျော်မွေ့နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Balance သည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့အလေ့အထများပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းတာ၊ သတိရှိတာကကီလိုဂရမ်အနည်းငယ်ကိုဆုံးရှုံးတာနဲ့ပိုလျှံနေတဲ့အသက်တာကိုသာဆက်လက်တည်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ယင်းအစား၎င်းသည်အစားအစာနည်းလမ်းကိုပြောင်းလဲခြင်းပါဝင်သည် ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာနေရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါ.
မလိုအပ်သောအရာ၊ ဥပမာအရက်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သည့်ထုတ်ကုန်များ။ သဘာဝ၊ လတ်ဆတ်သောနှင့်ရာသီအလိုက်ဖြစ်သောအစားအစာများကိုစားခြင်းသည်အလေ့အထကိုပြောင်းလဲရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကောင်းစွာစားခြင်း၊ မျှတခြင်းနှင့်မတူညီသောနည်းဖြင့်စားခြင်းနှင့်မကြာမီသင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဤအပြောင်းအလဲများကိုသတိပြုမိလာလိမ့်မည်။
သတိရပါ၊ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့်ကီလိုဂရမ်များစွာကိုဆုံးရှုံးရန်လိုအပ်ပါကနောက်ဆက်တွဲအတွက်ဆရာဝန်၏ရုံးခန်းသို့သွားသင့်သည်။ ကျန်းမာရေးသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည် သင့်ကျန်းမာရေးကိုလျစ်လျူရှုသည့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်၎င်းသည်အလွန်ဆိုးရွားသည့်ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ကိုယ်အလေးချိန်ကျ » လေ့ကျင့်ခန်းမပါဘဲကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လို